Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Badbaadada Safarka & Xaaladaha Degdega ah » Ka bax South Lake Tahoe, oo ka mid ah kuwa booqda
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Magaalada California oo dhan ayaa laga daadgureeyay iyada oo la gubay goobo lagu nasto iyo dabaylo dab wata
Dabka ayaa baabi’iyay ku dhawaad ​​500 oo dhisme, wuxuu dhaawacay shan qof, wuxuuna gubay in ka badan 177,000 hektar, sida laga soo xigtay xogta Cal Fire.
Dadka deggan harada Lake Tahoe ayaa lagu amray inay maanta u jiheystaan ​​bariga.
Saraakiisha sharci fulinta ayaa guri -guri u tagay si ay u hubiyaan in qof walba u hoggaansamay.
Ilaa 24,000 oo qof ayaa durba ka baxay guryahooda waddada weyn ee isku xirta South Lake Tahoe iyo Sacramento.
Daad -gureynta gudaha iyo hareeraha Magaalada caanka ah ee South Lake Tahoe ee Calfiornia ayaa timid markii Adeegga Kaynta ee Mareykanka ay xireen dhammaan 18 kaymo qaran ee California dadka ku dhex jira xilli dab ah oo durba isu beddelaya mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee la diiwaan geliyo.
Dadka deggan magaalo dalxiis oo caan ah oo ku taal California, South Lake Tahoe oo ku taal xadka gobolka ee Nevada, ayaa lagu amray inay maanta u jiheystaan ​​bariga, iyadoo askar boolis ah ay guri guri u galayaan si ay u hubiyaan in qof walba uu u hoggaansamay amarka daadgureynta, maadaama dab ba’an oo ba’an uu ku dhow yahay .
Amarada daadguraynta qasabka ah ayaa laga soo saaray magaalada loo dalxiis tago ee South Lake Tahoe, California oo ah Caldor Fire-mid ka mid ah 20 dab oo waaweyn oo hadda ka holcaya Gobolka Dahabka ah-ayaa la xiray shaqaalaha dab -damiska, oo ay gacan ka geysteen barafka madadaalada ee dalxiiska, ayaa si ba'an isugu dayaya inay xakameeyaan dabka.
Ilaa 24,000 oo qof ayaa durba ka baxay guryahooda waddada weyn ee isku xirta South Lake Tahoe iyo Sacramento. Dabka ayaa baabi’iyay ku dhawaad ​​500 oo dhisme, wuxuu dhaawacay shan qof, wuxuuna gubay in ka badan 177,000 hektar, sida laga soo xigtay xogta Cal Fire.
Dabka Caldor wuxuu ahaa kaliya 14% galabnimadii Isniinta, dab -damiyayaasha gobollada Riverside iyo San Diego, koonfurta Los Angeles, waxay la kulmeen dhibaatooyin la mid ah sidii dabka Chaparral loo xakameyn lahaa. Muuqaallo muuqaal ah oo la yaab leh oo la qabtay dhammaadkii toddobaadka ayaa muujinaya diyaaradaha qumaatiga u kaca oo ku shubaya taangiyo biyo ah dabka, kaas oo kor loogu qaaday duufaan dab ah.
Dabka dabku waa wax dabiici ah California, in kasta oo saraakiisha iyo saynisyahannadu ay sidoo kale ku eedeeyeen isbeddelka cimilada inay sii dheereeyeen waqtiyada qallalan oo ay sii xumeeyeen darnaanta dababka. Maamulka California ayaa sidoo kale khubarada qaarkood - iyo madaxweynihii hore Donald Trump - ku eedeeyeen maamul xumada kaynta.